Ra’iisul wasaare Kheyre oo saacadaha soo socdo si rasmi ah ugu dhawaaqi doonno golaha wasiirada cusub – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Ra’iisul wasaare Kheyre oo saacadaha soo socdo si rasmi ah ugu dhawaaqi doonno golaha wasiirada cusub
Wararka ugu dambeeyay ee naga soo gaarayo xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in haatan ay halkaasi ka socoto qaban-qaabadii ugu dambeysay uu ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre kusoo magacaabi lahaa golaha wasiiradda cusub ee xukuumadda federaalka Soomaaliya.
Wariyaasha ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa haatan ku sugan xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya, waxaana saacadaha soo socdo la filayaa in ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre uu si rasmi ah ugu dhawaaqo xubnaha ka mid noqonaya xukuumadda cusub ee Soomaaliya.
Ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa la sheegayaa inuu haatan soo gaba-gabeeyay wadatashiyadii ugu danbeeyay ee magacaabida golaha wasiirada cusub, kadib kulan uu xarunta madaxtooyadda kula yeeshay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo iyo guddoomiyaha baarlamaanka Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari.
Ku dhawaaqista xubnaha ka mid noqonaya golaha wasiirada ayaa laga yaabaa inay gaarto ilaa gelinka dambe ee maanta, iyadoona wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan in tiradda golaha wasiirada ay noqon doonaan 25 wasaaradood, iyadoona sidoo kale ay jiri doonaan 3 ra’iisul wasaare ku-xigeeno.
Saacadaha soo socdo ayaa la filayaa in ra’iisul wasaare Kheyre uu si rasmi ah ugu dhawaaqo golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya, iyadoona maalinta berrito la filaayo in madaxweyne Farmaajo uu amba-baxo magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya.